Cloud Storage ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
23 Nov 2018 . 12:09 PM
ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကျနော်တို့ရဲ့ မိသားစု၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ နဲ့သက်ဆိုင်တာ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရေးကြီးအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းဆည်းတဲ့အခါမှာ Physical Storage တွေဖြစ်တဲ့ CD ၊ DVD တွေအပြင် Computer ၊ Memory Stick နဲ့ Hard Disk Drive တွေပေါ်မှာ အဆင့်မြင့်မြင့်သိမ်းဆည်းလာကြပါပြီ။ အချိန်ကာလကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှ ထိန်းသိမ်းရတဲ့ အချက်အလက်တွေပိုများပြားလာသလို မမြဲတဲ့သင်္ခါရသဘောအရ ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် ပျောက်ဆုံးပျက်စီးသွားမလဲဆိုတာ ကြိုပြီးမခန့်မှန်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပုံမှန်အသုံးပြုနေကြ Physical Drive တွေအပြင် Cloud Drive တွေကိုပါအသုံးပြုပြီးကျနော်တို့ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို Backup အနေနဲ့သိမ်းဆည်းဖို့လိုလာပါပြီ။
ဒီနေရာမှာ Online Storage Cloud Drive ဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာ ထင်သာမြင်သာမယ့်နည်းလမ်းလေးနဲ့ ရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်။
A က Digital Data တွေဖြစ်တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ရုပ်ရှင် နဲ့သီချင်းတွေ စတဲ့အချက်အလက်တွေကို စိတ်ချရတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ သိမ်းထားချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်မရွေး အဲ့ဒေတာတွေကို ပြန်ကြည့်နိုင်မယ်၊ ကူးယူနိုင်မယ်၊ ပြင်ဆင်နိုင်မယ် စတဲ့အချက်တွေကိုလည်းလုပ်ချင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ Memory Stick တစ်ချောင်းမှာထည့်ပြီး ရောက်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရပေမယ့် ပျက်သွားမှာ၊ ကျပျောက်သွားမှာကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် တခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားနေပါတယ်။
B ကတော့ အိမ်မှာအနေများတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Network ချိတ်ဆက်မှုနည်းပညာကိုလည်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးပါ။ သူကတော့ အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ Hard Disk Drive တစ်ခုကို ၂၄ နာရီလုံးအသုံးပြုနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားပြီး အချိန်မရွေးနေရာမရွေးအသုံးပြုနိုင်အောင် အင်တာနက်နဲ့ပါ ကွန်ယက်ချိတ်ထားပါတယ်။ ကြိုက်တဲ့နေရာကနေ အလွယ်တစ်ကူ ဝင်ရောက်နိုင်မယ့် Software Program ကိုပါစိတ်ကြိုက်ရေးသားထားပြီး UI ပိုင်းကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတော့တယ်။ သူ့ရဲ့ ပြင်ဆင်မွန်းမံထားတဲ့ Hard Disk Drive ဟာ နေရာလွတ်တွေအများကြီးကျန်နေပြီးသူ့အတွက် လိုတာထက်ပိုနေတာကြောင့် သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ A ကို ၄င်းရဲ့ Data တွေလာရောက်သိမ်းဆည်းဖို့ကမ်းလှမ်းပါတယ်။ အဲ့လိုကမ်းလှမ်းတဲ့အခါ A အတွက် သီးသန့်အသုံးပြုနိုင်မယ့် Storage အပိုင်းတစ်ခု ခွဲပြီးသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
သူ့မှာရှိတဲ့ လွတ်နေတဲ့ Storage တွေထဲက ၃ပုံ ၁ပုံကိုခွဲပေးလိုက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် A ရဲ့ Storage လိုအပ်မှုက B ပေးနိုင်တဲ့ပမာဏထက် ပိုများလာတဲ့အခါမှာ နောက်ထပ် Hard Disk Drive တစ်လုံးကိုတိုးချဲ့ပြီး A စီက အခကြေးငွေကောက်ခံကာ ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတော့တယ်။ A စီကနေ လစဉ်ကြေး၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်စဉ်ကြေးကောက်ခံပြီး B ဟာ သူ့ရဲ့ Storage Space တွေကိုပိုပြီးကောင်းမွန်စိတ်ချရအောင် ထိန်းသိမ်းကာ တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုပါ လက်ဆင့်ကမ်းရောင်းချပါတော့တယ်။
Cloud Storage တွေအားလုံးနီးပါးဟာ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့သဘောတရားကို အခြေခံပြီးလုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး User ကို အစမ်းပေးသုံးတဲ့အနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Storage Amount တစ်ခုကို အခမဲ့ပေးသုံးထားပါတယ်။ ၄င်းတို့ရဲ့ UI နဲ့ Friendly ဖြစ်မှုပေါ်အခြေခံပြီး User ကသဘောကျလာတဲ့နောက်မှာတော့ အခကြေးငွေနဲ့ စတင်ရောင်းချပေးပါတော့တယ်။
Cloud Storage ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယျလိုအလုပျလုပျသလဲ?
ဒီနခေ့တျေမှာ ကနြျောတို့ရဲ့ မိသားစု၊ ကိုယျရေးကိုယျတာ နဲ့သကျဆိုငျတာ ဒါမှမဟုတျ အလုပျနဲ့ပတျသကျတဲ့ အရေးကွီးအခကျြအလကျတှကေိုသိမျးဆညျးတဲ့အခါမှာ Physical Storage တှဖွေဈတဲ့ CD ၊ DVD တှအေပွငျ Computer ၊ Memory Stick နဲ့ Hard Disk Drive တှပေျေါမှာ အဆငျ့မွငျ့မွငျ့သိမျးဆညျးလာကွပါပွီ။ အခြိနျကာလကွာမွငျ့လာတာနဲ့အမြှ ထိနျးသိမျးရတဲ့ အခကျြအလကျတှပေိုမြားပွားလာသလို မမွဲတဲ့သင်ျခါရသဘောအရ ပစ်စညျးတဈခုဟာ ဘယျအခြိနျ ဘယျနရောမှာ ဘယျလိုအကွောငျးကွောငျ့ ပြောကျဆုံးပကျြစီးသှားမလဲဆိုတာ ကွိုပွီးမခနျ့မှနျးနိုငျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ပုံမှနျအသုံးပွုနကွေ Physical Drive တှအေပွငျ Cloud Drive တှကေိုပါအသုံးပွုပွီးကနြျောတို့ရဲ့ အခကျြအလကျတှကေို Backup အနနေဲ့သိမျးဆညျးဖို့လိုလာပါပွီ။
ဒီနရောမှာ Online Storage Cloud Drive ဆိုတာဘာလဲ? ဘယျလိုအလုပျလုပျသလဲဆိုတာ ထငျသာမွငျသာမယျ့နညျးလမျးလေးနဲ့ ရှငျးပွပေးလိုကျပါတယျ။
A က Digital Data တှဖွေဈတဲ့ ဓါတျပုံတှေ၊ ရုပျရှငျ နဲ့သီခငျြးတှေ စတဲ့အခကျြအလကျတှကေို စိတျခရြတဲ့နရောတဈခုမှာ သိမျးထားခငျြပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခြိနျမရှေး အဲ့ဒတောတှကေို ပွနျကွညျ့နိုငျမယျ၊ ကူးယူနိုငျမယျ၊ ပွငျဆငျနိုငျမယျ စတဲ့အခကျြတှကေိုလညျးလုပျခငျြပါတယျ။ ပုံမှနျဆိုရငျတော့ Memory Stick တဈခြောငျးမှာထညျ့ပွီး ရောကျတဲ့နရောမှာသုံးလို့ရပမေယျ့ ပကျြသှားမှာ၊ ကပြောကျသှားမှာကို စိုးရိမျတဲ့အတှကျ တခွားနညျးလမျးတဈခုကိုစဉျးစားနပေါတယျ။
B ကတော့ အိမျမှာအနမြေားတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပွီး Network ခြိတျဆကျမှုနညျးပညာကိုလညျးကြှမျးကငျြသူတဈဦးပါ။ သူကတော့ အရညျအသှေးမွငျ့မားတဲ့ Hard Disk Drive တဈခုကို ၂၄ နာရီလုံးအသုံးပွုနိုငျအောငျ ပွငျဆငျထားပွီး အခြိနျမရှေးနရောမရှေးအသုံးပွုနိုငျအောငျ အငျတာနကျနဲ့ပါ ကှနျယကျခြိတျထားပါတယျ။ ကွိုကျတဲ့နရောကနေ အလှယျတဈကူ ဝငျရောကျနိုငျမယျ့ Software Program ကိုပါစိတျကွိုကျရေးသားထားပွီး UI ပိုငျးကိုအကောငျးဆုံးပွငျဆငျထားပါတော့တယျ။ သူ့ရဲ့ ပွငျဆငျမှနျးမံထားတဲ့ Hard Disk Drive ဟာ နရောလှတျတှအေမြားကွီးကနျြနပွေီးသူ့အတှကျ လိုတာထကျပိုနတောကွောငျ့ သူငယျခငျြးဖွဈတဲ့ A ကို ၎င်းငျးရဲ့ Data တှလောရောကျသိမျးဆညျးဖို့ကမျးလှမျးပါတယျ။ အဲ့လိုကမျးလှမျးတဲ့အခါ A အတှကျ သီးသနျ့အသုံးပွုနိုငျမယျ့ Storage အပိုငျးတဈခု ခှဲပွီးသတျမှတျပေးလိုကျပါတယျ။
သူ့မှာရှိတဲ့ လှတျနတေဲ့ Storage တှထေဲက ၃ပုံ ၁ပုံကိုခှဲပေးလိုကျတာပါ။ ဒါပမေယျ့ A ရဲ့ Storage လိုအပျမှုက B ပေးနိုငျတဲ့ပမာဏထကျ ပိုမြားလာတဲ့အခါမှာ နောကျထပျ Hard Disk Drive တဈလုံးကိုတိုးခြဲ့ပွီး A စီက အခကွေးငှကေောကျခံကာ ဝနျဆောငျမှုပေးပါတော့တယျ။ A စီကနေ လစဉျကွေး၊ ဒါမှမဟုတျ နှဈစဉျကွေးကောကျခံပွီး B ဟာ သူ့ရဲ့ Storage Space တှကေိုပိုပွီးကောငျးမှနျစိတျခရြအောငျ ထိနျးသိမျးကာ တခွားမိတျဆှတှေကေိုပါ လကျဆငျ့ကမျးရောငျးခပြါတော့တယျ။
Cloud Storage တှအေားလုံးနီးပါးဟာ အထကျမှာပွောခဲ့တဲ့သဘောတရားကို အခွခေံပွီးလုပျဆောငျတာဖွဈပါတယျ။ ပထမဦးဆုံး User ကို အစမျးပေးသုံးတဲ့အနနေဲ့ သတျမှတျထားတဲ့ Storage Amount တဈခုကို အခမဲ့ပေးသုံးထားပါတယျ။ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ UI နဲ့ Friendly ဖွဈမှုပျေါအခွခေံပွီး User ကသဘောကလြာတဲ့နောကျမှာတော့ အခကွေးငှနေဲ့ စတငျရောငျးခပြေးပါတော့တယျ။